Iindaba eNigeria nangaphaya: Mnu Eazi utyhila # emPawa30 + Ngakumbi
I-Rave News Digest: UMnumzana Eazi # emPawa30, uSenate Thetha malunga nokuhlolwa kwesikhululo seenqwelomoya i-Improper eCoronavirus, Lewandowski + Okunye
URobert Wun uhambisa i-Award efanelekileyo ye-Garde ye-Elegance ngokuQokelelwa kwe-AW20
Mr U-Eazi ubuyile nenkqubo ye # emPawa30, uSenate uthetha ngovavanyo olungalunganga lwe-coronavirus kwizikhululo zeenqwelo moya zaseNigeria, iLewandowski ngaphandle ngenxa yokulimala. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. Umnumzana Eazi uqalisa inkqubo ye-emPawa Africa nge # emPawa30
Mnu Eazi # emPawa30
Nge-26 kaFebruwari ngo-2020, imvumi yaseNigeria eyonwabisayo Oluwatosin Ajibade, eyaziwayo ngokuba Mnu Eazi, wabhengeza uluhlu lweetalente zomdlalo we- # emPawa30, isigaba sokugqibela senkqubo yakhe ebalaseleyo ye-emPawa Africa.
Kukhethwe amagcisa angama-30 e-Afrika ukuba athathe inxaxheba kule nkqubo-italente yokufaka italente enikezela ngamagcisa asakhasayo nezixhobo, inkxaso-mali yokuqalisa kunye nokunika iingcebiso ukuze babe ziingcibi-oosomashishini.
Kudliwanondlebe namhlanje neRolling Stone, uMnu Eazi uthethe ngale nkqubo ye-EmPawa, “Inokuba lilizwi; isenokuba kukuhamba. Emva koko senze isandi esinzulu-yintoni le babekhupha kuyo kwiprofayile zabo, kwezinye iingoma. Emva koko sifikelela kubo ukuba basithumelele umculo. Ke, xa siqinisekile, sibathumela ukuba bangenise kunye nabavelisi ukufumana ukuba bangangena na benze izinto. Emva kwawo onke la manyathelo, sikhetha. ”
Umculi ngamnye kwi # emPawa30 uya kufumana isibonelelo esingahlawulelwayo se- $ 10,000 esingafakwanga kwifilimu yomculo wokuqala wobungcali, kunye nokucebisa, iinkonzo zokuthengisa kunye nenye inkxaso yokuqalisa umsebenzi wabo wokurekhoda kwihlabathi.
Amagcisa ali-10 abonisa esona sithembiso aya kuthunyelwa kwi-masterclass yeeveki ezintathu eGhana nge-2020 ka-Juni. Bayakufumana amashishini, ukubhala, ukuthengisa kunye noqeqesho lokuvelisa. Kwezi, amagcisa amabini aya kufumana inkxaso-mali eyongezelelweyo yokuhlawula ulawulo, ukuthengisa kunye nemirhumo yomthetho ngo-2020, kunye nokwakha umculo kunye neevidiyo.
2. Akukho kuhlolwa kufanelekileyo kwabahambi beCoronavirus kwizikhululo zeenqwelomoya zaseNigeria zithi iSenate
USenator Ahmad Lawan
UMongameli weSenethi, Ahmad Lawan, ngolwesine, ndatyhola i-Federal Ministry yezeMpilo ngokungabeki manyathelo athambileyo ukuthintela ukuqhambuka kweCoronavirus eNigeria. Ubuye ke, ecenga iKomiti yeSenate yoKhathalelo lweMpilo oluSiseko ukuba iqhubeke nokunxibelelana neCandelo loMgaqo-nkqubo ukuqinisa ukujonga abakhweli kwizikhululo zeenqwelomoya kunye namachweba.
U-Lawan ukucacisile oku kulandela inqaku loku-odolwa kweSekela-Gosa leSenate, uSenator Ajayi Boroffice. U-Boroffice utsala umdla weSenethi kukungaphumeleli kwabasebenzi bezempilo kwizikhululo zeenqwelomoya nakwizibuko lokuhlola abagibeli abaza kungena elizweni.
Uye wachaza ukuba uphantsi kovavanyo lweCoronavirus ekufikeni kwisikhululo seenqwelomoya eMzantsi Afrika kutsha nje. Uthe ukuhlolwa kwisikhululo seenqwelomoya eMzantsi Afrika kuhlala kuthatha imizuzu engama-30 ngaphambi kokuba abakhweli bavunyelwe ukuba behle kwinqwelomoya.
Uthe imeko yahlukile ekufikeni kwakhe kwisikhululo senqwelomoya saseNigeria xa amagosa ezempilo kwindawo yesikhululo seenqwelomoya akhupha ifomu kubahambi ebonisa ukuba bayagula okanye akunjalo.
3. IRwanda iyala ukuba kudlalwe ihlazo ekufeni komculi wevangeli
Abasemagunyeni baseRwanda bakhuphele ngaphandle kweziduko ekufeni komculi wevangeli Kizito Mihigo, obhubhe elugcinweni lwamapolisa kwiintsuku ezili-10 ezidlulileyo. Igunya lezotshutshiso kuzwelonke lithe ingxelo yeRwandaan Investigation Bureau yabonisa ukuba ubuchithile ubomi bakhe ngokuzixhoma ngezinto eziseleni lakhe. Amapolisa asemsebenzini ngobo busuku athi akukho ngxoxo ivakalayo.
Le mvumi, ithandwayo yaziwa ngegama lakhe okokuqala nguKizito, isweleke kwiintsuku ezintathu emva kokubanjwa kufutshane nomda waseBurundi. Wayetyholwa ngokuzama ukubaleka ilizwe aze ajoyine amaqela abavukeli alwa norhulumente waseRwanda.
4. USekela-Mongameli wase-Iran kwezabaNtshatsheli kunye neMicimbi yoSapho osulelekileyo yiCoronavirus
USekela-Mongameli waseIran kwiMicimbi yabaSetyhini kunye neMicimbi yezeSapho, uMassoumeh Ebtekar
IMasoumeh Ebtekar, usekela Mongameli welizwe lase-Iran labasetyhini kunye neMicimbi yoSapho, uvavanyile ukuba une-Coronavirus.
Umongameli-Mongameli ukwaziwa njengesithethi-IsiNgesi sabaxhasi babathinjwa abathimba u-1979 ekubambeni kwindlu yozakuzo e-Tehran kwaye wabangela ingxaki yeentsuku ezingama-444.
NgoLwesibini, amagosa aseIran aqinisekise ukuba uSekela Mphathiswa Wezempilo I-Iraj Harirchi Wayenosulelo kwaye wayehlala yedwa.
Baninzi abantu abasweleka eIran besuka kwintsholongwane kunakuqala kwenye indawo ngaphandle kweTshayina. La mazwe mabini anonxibelelwano olomeleleyo lokurhweba.
Amanye amazwe okwindawo ebonakalayo yi-Korea yase-Korea kunye ne-Itali, apho iimeko ziye zanda khona kule mihla.
5. URobert Lewandowski uphume iiveki ezine enzakele
URobert Lewandowski ufumene inqaku lakhe le-11 yeChampions League kwimidlalo emithandathu kule sizini ngokuchasene neChelsea
Umdlali weBayern Munich URobert Lewandowski uyakuphulukana nomlenze wesibini we-Champions League yabo ngokubambana ne-Chelsea emva kokuba egwetywe iiveki ezine ngokulimala emlenzeni. Amazwe aphesheya ePoland ancede amabini Serge Gnabry Iinjongo kunye nokufumana amanqaku okwesithathu njengoko iBayern iphumelele ngo-3-0 eStamford Bridge kumlenze wokuqala ngoLwesibini.
U-Bayern uthe waphula i-tibia yakhe kufutshane nedolo lakhe lasekhohlo ngexesha lomdlalo. Lo mfundi uneminyaka engama-31 ubudala uphoswa okungenani yimidlalo emithandathu.
IVeki yeendaba yethu yoSuku lweeVeki ikulethela isishwankathelo sezihloko ezintlanu ezishushu namhlanje eziquka iindaba zakutshanje eNigeria, iindaba zaseAfrika, iindaba zezopolitiko, iindaba zamazwe aphesheya, iindaba zeHollywood, iindaba zemidlalo kunye neendaba zabantu abadumileyo baseNigeria nabadumileyo baseAfrika. Kwakhona, lindela amanye amabali aphezulu kunye nezinye iindaba ezihambahambayo zakutshanje namhlanje eSahara. Isishwankathelo seendaba zakutshanje zaseNigeria namhlanje ngo-2020.
Uhlobo Rave Februwari 27, 2020